Halyey Man United ah oo u dabaal dagay wararkii ugu dambeeyey ee Coutinho la xiriirinayey Barcelona! – Gool FM
Halyey Man United ah oo u dabaal dagay wararkii ugu dambeeyey ee Coutinho la xiriirinayey Barcelona!
(London) 03 Jan 2017. Xifaaltanka aan dhammaan ee u dhexeeya Man United iyo Liverpool waxa sare u siiqaaday Gary Neville arbacadii.
Fallanqeeya Sky Sports waxa uu goostay In uu ka xanaajiyo jamaahiirta Liverpool kaddib markii uu ka felceliyey arin ku saabsan Philippe Coutinho.
Sida wararkii ugu dambeeey ay qabaan uma eka in Coutinho dib dambe ugu ciyaari doono Reds.
Brazilian-ka waxa uu doonaya in uu ku biro Barcelona bisha Janaayo waxa ayna si xoog leh ugu egtahay in ay dhici doonto.
Taas oo ay jirto ayuu ka talo bixiyey waxa quman oo ay tahay in Reds ka sameyso xaaladda Coutinho halyeygii hore ee Anfield Jammie Carragher oo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray:
Waxa ugu wacan ay tahay in Liverpool yeesho waa aqbalidda lacagta BADAN ee Coutinho si uu xagaaga u tago sida aan anaguba ka sameynay Keita, ma aha hadda. Maxay kooxi ka faa’ideysaa hadda? Waxaa si weyn halis ugu jira afarta sare iyo hore ugu socoshada Champions League-ga haddii ay iibiyan Janaayo, weyna adag tahay helidda bedelkiisa hadda. Haddii uu gaduud ciyaar diidmo sameeyo shaqsiyadiisa ay dhaawici doontaa.
Muxuu ku falceliyey Gary Neville?
Kabtankii hore waxa uu isna durbadiiba ku soo qoray Twitter—ka “Sheeko muxubo leh!”.
Can ka tegi maayo Liverpool balse bishan cidda uu doono ayuu is afgarad la gali karaa
Madaxda Man United oo ballan qaaday in ay suuqa bisha Janaayo ku garab is taagi doonaan Mourinho iyo wakiilo loo diray ciyaaryahanada saddexdan boos.....